Chromium haizokwanisa kushandisa izvi maficha chero nguva munguva pfupi iri kutevera; zvirinani kuchinjira kuFirefox | Linux Vakapindwa muropa
Chromium haizokwanisa kushandisa izvi maficha chero nguva munguva pfupi; kukurudzira kushandura kuFirefox
Vhiki rapfuura tinoburitsa chinyorwa chatakanyorera nhau dzakaipa kune vashandisi ve chromium: Google ichadzima mamwe maAPI kana tikasashandisa browser rako, iyo Chrome unogona kudzora zvirinani. Iyo kambani inotaura zvekuchengetedzeka, asi izvi zviri pachena danho rekuwana yakawanda musika mugove uye, sezvinei, rumwe ruzivo. Chromium ndiyo imwe nzira yakanaka kune Chrome, nekuti, kusvika zvino, yanga yakafanana, asi isina kusungirirwa kuGoogle, asi izvi zvichachinja mumwedzi isingasviki miviri.
Muchinyorwa chakaburitswa muna Ndira 19, takataura imwe yetsaona dzinotyisa: kuwiriranisa. Asi kugona kuenzanisa mabhukumaki, mapassword, nezvimwe, hazvizove izvo chete muganho unozove nevashandisi veChromium, uye pazasi iwe une runyorwa nezvose izvo izvo vashandisi vadzo zvavanopotsa. Izvo uye kurudziro yatinofambira mberi: enda ku firefox.
Zvatisingakwanise kuita neChromium kutanga munaKurume
Munguva pfupi iri kutevera, hatizokwanise kushandisa anotevera mabasa uye maAPI muChromium, kana chero imwe browser zvichibva painjini imwechete.
Bvumirana neakaundi yeGoogle.
Kuongorora kwakachengeteka (kubva kuGoogle).
Kana iwe uri mushandisi weChromium, ndiko kuti, webhurawuza iyo inowanikwa mune akawanda maLinux kugoverwa uye ane logo yakafanana neC Chrome asi nebhuruu, une zvishoma sarudzo. Imwe yacho ndeyekumirira mumwe munhu kuti agadzire imwe mhando yekuwedzera iyo inoita kuti imwe kana dzakawanda zvezvirambidzo zvataurwa zvashanda. Imwe ndeye mirira kuti Google idzokere pasi nehurongwa hwayo hweudzvanyiriri. Chechitatu chinokurudzirwa nenharaunda yekuvandudza.
Zvinonyanya kutaurwa nevakagadziri "Go Firefox." Iyo chete ndiyo yakavhurwa sosi browser inopa zvese zvatingave tichida, kana iyo chete isingatsamire paGoogle kuti ive yakanyanya. Kana iwe uchida Chromium, unogona kugara uchiedza kushandisa imwe mabhurawuza senge Akashinga, asi uchirangarira kuti kushamisika kusingafadzi hakubviswi mune ramangwana. Uye ndezvekuti mabhurawuza mazhinji anoshandisa avo pachavo enzanirana APIs, pakati pevamwe.
Shanduko ichaitika pa inotevera Kurume 15. Kana Google ikasadzokera kumashure, Chromium ichave yakaderera zvishoma. Kune rangu divi, kana izvi zvichiturikira vanhu vazhinji vachichinjirwa kuFirefox neMozilla ichivandudza browser rayo, shanduko inogamuchirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chromium haizokwanisa kushandisa izvi maficha chero nguva munguva pfupi; kukurudzira kushandura kuFirefox
inoita 12 mwedzi
Uyo anoti Firefox anoti Shinga. Ndeipi sarudzo yakanakisa kana iwe uchida Chromium.
Ndo izvo zvinoiswa posvo;)
Ini ndaishandisa Firefox nekuti ndiyo default browser yekuparadzirwa kweGNU / Linux, asi ndakabhowekana nekushandisa kwayo kwakanyanya zviwanikwa uye kudzima kusingatarisirwe. Kana ini ndikaisa kugoverwa kweGNU / Linux ndicho chinhu chekutanga chandinobvisa Firefox kuchinjana neVivaldi, Chromium kana Opera. Ndiri kuzopa Firefox kuyedza zvakare kuti ive nayo seimwe nzira yeChromium.
Dambudziko neVivaldi nderekuti haisi yakavhurwa sosi. Zvakare, mune yangu nyaya yekuti ini ndinoshanda kwenguva yakareba paManjaro Xfce-USB, inorembera, saka pandakangofunga kuishandisa zvakanyanya uye pane zvimwe zvigadzirwa, ndakakurumidza kukanganwa. Opera isarudzo, hongu, asi zvinonzwika seKushinga kwakasimba, izvo zvakanyanya kufanana neC Chrome asi zvisina zvakaipa.
Bvumirana neakaundi yeGoogle. Aiwa ndatenda
Geolocation. Pasi pechero zano
Dzvanya kufona. Ini ndaisatomboziva kuti zvaivepo
Google chiperengo. Tichafanirwa kudzidza kunyora zvakanaka
Chrome muturikiri. Yakanga iri lousy
Kuongorora kwakachengeteka (kubva kuGoogle). Google Safe Browsing? lol
vakamira vachiombera .. nice comment
Pindura kune deby
Zvakanaka, ini ndinonzwisisa kuti shanduko idzi hadzizokanganisa Chromium inovaka, asi chechitatu-bato maChromium-based mabhurawuza anoshandisa Google APIs.
Mheremhere iyi yatanga chaizvo nekuti inokanganisa Chromium, iyo yakaiswa mukuparadzirwa kwakawanda uye vanogadzira ndivo vaive vakanyunyuta. Iwo mamwe mabhurawuza aunotaura, iwo evatatu mapato, semuenzaniso Brave kana Vivaldi, vatove neyavo "Sync", saka izvi zvinovabata 0. Vivaldi akatotumira tweet nezvazvo.
Zvakanaka, ndinonzwisisa kuti shanduko idzi hadzizokanganisa Chromium inovaka, asi mabhurawuza echitatu-bato anoshandisa Google APIs. Unogona kusimbisa izvi?
Regerera kusaziva kwangu, asi sezvo isingakwanise kududzirwa kubva kubhurawuza, ini handizokwanise kududzira zvemukati kubva kuChirungu kuenda kuSpanish! WTF !! … ..
Kana ivo vakavandudza iwo chaiwo mushanduro zvakanyanya kuburikidza neMuchina Kuziva, zvinokwanisika sei kubvisa kana kunyatsogadzirisa kupereterwa kwegwaro muGoogle Docs kana Hofisi 365, chii chichaitika ipapo neChannel OS?
Pindura kuna Alex
Mhoro Alex. Izvo hazvifanirwe kunge iri yakasarudzika Chrome chimiro. Pa Chrome OS, funga kuti "Chrome", iyo ichiri kubva kuGoogle uye isingafanire kukanganiswa. Ivo chavanotora chichava Chromium, iyo ine iyo yebhuruu logo. Vamwe vese, sezvo vaine yavo yega timu yevagadziri kumashure kwavo, ichaenderera nemabasa akafanana, senge Brave kana Vivaldi Sync panzvimbo yeGoogle Sync.
Spot, wekuzvarwa Spotify mutengi anoenderana neGNOME yako chaizvo, kana uri Premium
Faira isina malware - iyi tyisidziro ndeyei?